सरकारलाई दबाब दिँदै सुशासन अभियानको प्रदर्शन
शिरिश मान महर्जन काठमाडौं - मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७
नेपाल सुशासन अभियानले विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई दबाब दिँदै प्रदर्शन गरेको छ। अभियानका संयोजक रमेश खरेललगायत अभियानकर्मीले मंगलबार बिहान माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न, कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्न, भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नलगायत माग राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७
उफ! चाबहिल-मित्रपार्क सडकमा कसरी हिँड्नु?
काठमाडौं उपत्यकामा प्रदुषणको मुख्य स्रोतका रूपमा सवारीसाधन र इँटाभट्टालाई लिइन्छ। तर, चाबहिलमा सडक विस्तार क्रममा सावधानी नअपनाउँदा धुलाम्य छ। तपाईं यही सडक हिँड्नुभो भने एकैछिनमा धुलाम्य भइन्छ। धन्य, कोरोना महामारीमा मास्क अनिवार्य बनिदिएको छ। दिनेश गाेले
कमलपोखरीका माछा स्थानीयले सकिसके, महानगर कता छ?
कमलपोखरीका माछालाई स्थानीयले मारिरहेका छन्। जसमा महानगर बेखबरजस्तै छ। रानीपोखरी पुन:निर्माण गर्दा संरक्षणका लागि भन्दै कमलपोखरीमा सारिएका माछा यतिबेला स्थानीयले मारिरहेका हुन्। शिरिश मान महर्जन